CPR7EA9 Mota Injini Plug Pearl Nickel Shell 1.1mm Gap Mhangura Core Electrode, China CPR7EA9 Mota Injini Plug Pearl Nickel Shell 1.1mm Gap Mhangura Core Electrode Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - TAKUMI AUTO CHIKAMU
CPR7EA9 Mota Injini Plug Pearl Nickel Shell 1.1mm Gap Mhangura Core Electrode
Thread: M10 * 1 Tsvaga: 19mm
Hex: 16mm Kutsiva: NGK CPR7EA9 DENSOU22EPR9 MPTORCRAFT PGS22CCAR
Shell: Pearl Nickel Ceramic: Isostatic Kupfuurira
shinda M10 * 1
Electrode Enovandudza Mhangura yakakosha electrode
Spark plugs ndechimwe chezvinhu zvisinganzwisisike zvikamu zveinjini. Mibvunzo yakawanda yakauya pamusoro pemakore, ichisiya vanhu vazhinji vakavhiringidzika.
Iri gwaro rakagadzirirwa kubatsira nyanzvi, hobbyist, kana makiriniki emujaho mukunzwisisa, kushandisa, uye kugadzirisa matambudziko spark plugs. Ruzivo irworwo rwuri mugwaro urwu runoshanda kune ese marudzi enjini dzemukati dzemoto: maviri enjini dzekurovera, enjini dzinotenderera, epamusoro mashandiro / enjinjini uye mota dzemumigwagwa.
Spark plugs ndiyo "hwindo" mukati meinjini yako (chapupu chako chega chega kumuchina wemoto), uye inogona kushandiswa sechinhu chakakosha chekuongorora. Kunge thermometer yemurwere, spark plug inoratidza zviratidzo uye mamiriro ekuita kweinjini. Iyo tuner ine ruzivo inogona kuongorora izvi zviratidzo kuti itarise pasi iyo yakakonzera matambudziko mazhinji, kana kuona mweya / mafuta ratios.